Imibandela | Bomvu, Luhlaza okwesibhakabhaka, uViolet, iGreen Laser Pointer | I-Laser - TorLaser.com
1 · Isaziso Sezomthetho
Ngokuya nge-Law 34/2002, kaJulayi 11, i-Services Information Society ne-Electronic Commerce neminye imithetho esebenzayo sikwazisa ngalokhu ukuthi le ngosi iphethwe yi-https: //torlaser.com Corraliza Borja Sanchez "enenombolo yeNIF" 04857077Y ".
Esungulwe eCalle San Juan Bautista La Salle N10 1A, Talavera de la Reina, Toledo, Spain.
Ungaxhumana nathi ekhelini le-imeyili "info@torlaser.com".
Izinsizakalo umsebenzisi angazithenga kuwebhu https://torlaser.com ziyimikhiqizo yezikhombisi ze-laser. Onke amanani afakwa ku-VAT. Endabeni yomthofu kufaka phakathi isaphulelo kuzonikezwa kulowo nalowo mkhiqizo.
Sigodla ilungelo lokushintsha ngaphandle kokuqaphela ngaphambili le Nqubomgomo Yobumfihlo ukuze ivumelane nemithetho ekhona yokuvikela idatha. Ezimweni ezinjalo, imemezele kule webhusayithi izinguquko ukuze zaziwa ngumsebenzisi.
1.1 Impahla yengqondo
1. Onke ama-logo, uphawu lwentengiso, amagama ezohwebo, okuqukethwe, ukwakheka, ukwakheka kanye nokwethulwa kwezinto kanye nanoma yiluphi olunye ulwazi oluvela kule Webhusayithi kungokwabakwaTorLaser.com futhi bavikelwe amalungelo obunikazi bendawo nokuqonda.
2. Umsebenzisi wenqatshelwe ukukhiqiza kabusha, ukucubungula, ukusabalalisa, ukuxhumana komphakathi futhi ngokujwayelekile noma iyiphi enye indlela yokuxhaphaza izinto ezishiwo esigabeni esedlule ngaphandle kwemvume yeTorLaser.com.
3. Umsebenzisi ngeke asebenzise ukuthi bangasusa, baguqule, noma basebenzise noma imaphi amathuluzi okuvikela noma amasistimu okuphepha angafakwa futhi abeke engcupheni noma alimaze noma akhubaze iWebhusayithi kanye / noma okuqukethwe kuyo.
4. I-TorLaser.com ayizibophezele ekusebenziseni kabi okungenzeka ukuthi abantu besithathu benza le webhusayithi, noma imininingwane edluliselwa ngayo kubantu besithathu. Okuqukethwe okunikezwe ngale webhusayithi kufundisa nje, ngakho-ke ukusetshenziswa kwalokhu kungenza umsebenzisi futhi noma yimiphi imiphumela noma ukulimala okungase kube khona, kungumthwalo wemfanelo womsebenzisi kuphela.I-TorLaser.com ayifakwa emonakalweni wanoma yiluphi uhlobo olubangelwe abasebenzisi ngokusebenzisa izixhumanisi (izixhumanisi), izinkomba namathuluzi okusesha avumela abasebenzisi ukufinyelela amawebhusayithi aphethwe futhi / noma aphethwe abantu besithathu kanye nokuba khona kwamagciwane noma enye ikhodi enonya ku okuqukethwe okungadala noma yimuphi umonakalo ohlelweni lwekhompyutha, amadokhumenti kagesi noma amafayela wabasebenzisi. I-TorLaser.com inelungelo lokuthatha izinyathelo zomthetho ibona kufanelekile kusukela kunoma yikuphi ukusetshenziswa okungekho emthethweni ngabantu besithathu kokuqukethwe kwiwebhusayithi yayo.
2 · Inqubomgomo Yobumfihlo
2.1 Ukuvikelwa kwedatha
Ukuvakashela le webhusayithi akusho ukuthi umsebenzisi uyadingeka ukuthi ahlinzeke ngolwazi ngayo. Esimweni lapho umsebenzisi enikezela nganoma yiluphi ulwazi lomuntu siqu, imininingwane eqoqwe kule webhusayithi izocubungulwa ngendlela efanelekile nangokomthetho ngaso sonke isikhathi ngokuya ngemigomo namalungelo aqukethe ku-Organic Law 15/1999 ka-13 Disemba, Ukuvikelwa Kwemininingwane Yabantu (i-LOPD) ) neminye imithetho.
Kulokhu, sizizwa sinesibopho sokwazisa ngochungechunge lokuqisa mayelana nemininingwane yomuntu eqoqwe iBorja Sanchez Corraliza ngokusebenzisa iwebhusayithi yayo.
2.1.2 Imininingwane yabasebenzisi
- Ingxenye "Dala i-akhawunti yakho"
Ngokusho koMthetho 15/1999 kaDisemba 13, Ukuvikelwa Kwemininingwane Yakho (i-LOPDP), sikwazisa ukuthi ngokugcwalisa amafomu, imininingwane yakho uqobo izogcinwa futhi icutshungulwe kumafayela eCorraliza Borja Sanchez.
Inhloso enkulu yaleli fayela ukuphathwa kwabasebenzisi ababhalisiwe kwiwebhusayithi yethu nokuthumela ukukhangisa maqondana nemikhiqizo nezinsizakalo ezithengiswa nguBorja Sanchez Corraliza noma ukuthumela izikhangiso, izaphulelo kanye nokuphakanyiswa komkhiqizo nezinsizakalo zabanye.
Uma ungafisi ukuthola ukukhangisa okunjalo kumele uhlole ibhokisi elikulelifomu. U-Borja Corraliza Sanchez uqinisekisa ubumfihlo bemininingwane futhi uqinisekisa ukuthi akukho esimweni esidluliselwa kunoma yikuphi okunye ukusebenzisa ngaphandle kokuvuma nokuzwakalayo kwabasebenzisi bethu. Vele ubuze leyo mininingwane edingekayo ukuhlinzeka insizakalo edingekayo futhi izosetshenziselwa le njongo kuphela.
- Ingxenye "Ukuthenga okuphelele"
Ngokusho komthetho 15/1999 kaDisemba 13, Ukuvikelwa Kwedatha Yakho (Umthetho), sikwazisa ukuthi ngokugcwalisa amafomu, imininingwane yakho uqobo izogcinwa futhi icutshungulwe kumafayela u-Borja Corraliza Sanchez.
Inhloso eyinhloko yaleli fayela ukugcina ubudlelwano benkontileka namakhasimende ethu, ukulungiselela ukucubungula ama-oda, ukutholwa kwezifundo zezibalo kanye nokuthumela okukhangiswa okuphathelene nemikhiqizo nezinsizakalo ezithengiswe yiTorLaser.com noma ngokuthumela ukukhangisa, izaphulelo kanye nokuphromotha kwemikhiqizo nezinsizakalo zika abanye.
Njengomphumela wokuthenga imininingwane yabo kungenzeka idluliselwe kubamukeli abalandelayo:
Amabhange okukhokha ngokuthenga kwamakhadi wesikweletu.
· IHhovisi labathengi kanye nabasebenzisi uma kwenzeka kunezikhalazo.
· Abakhiqizi, izinsizakusebenza zezobuchwepheshe kanye / noma abathengisi bezitolo endabeni yeziqinisekiso noma zokulungiswa. Abamukeli bangatholakala ngaphakathi kwendawo yaseSpain nangaphandle kwayo, kuya ngomkhiqizo kanye / noma nensizakalo ethengiwe.
· Ekucabangeni okusungulwe ngokusemthethweni, okufana Nemikhosi Yezokuphepha.
I-Borja Sanchez Corraliza iqinisekisa ubumfihlo bemininingwane futhi iqinisekisa ukuthi akunakudluliselwa kunoma yikuphi okunye ukusetshenziswa ngaphandle kokuvuma kwangaphambili kwamakhasimende ethu. Vele ubuze leyo mininingwane edingekayo ukuhlinzeka insizakalo edingekayo futhi izosetshenziselwa le njongo kuphela.
- Ingxenye "Iphepha lezindaba"
Ngokuya ngezinhlinzeko zoMthetho 15/1999 zangoDisemba 13, Ukuvikelwa Kwemininingwane Yakho, sikwazisa ukuthi i-imeyili efakiwe izofakwa kwifayela eliphethwe uBorja Sanchez Corraliza ukuze athumele iphephandaba. Le bulletin yenzelwa imininingwane.
Imininingwane yomuntu uqobo isetshenziswa uBorja Sanchez Corraliza ngokwezidingo ze-Law 15/1999, zangoDisemba 13, Ukuvikelwa Kwemininingwane Yabantu.
- Ingxenye "Xhumana "
Ngokuhambisana nezinhlinzeko zoMthetho 15/1999 zangoDisemba 13, Ukuvikelwa Kwemininingwane Yakho, sikwazisa ukuthi i-imeyili eyenziwe yafakwa kuzofakwa kwifayela elingeloku Borja Sanchez Corraliza oda ukuphatha isikhungo sokusekelwa https://torlaser.com nekhasimende thintana nge-imeyili.
Imininingwane equkethe imiyalezo yokuxhumana ne-indiferete uhlobo lomgwaqo olusetshenzisiwe luyimfihlo. I-TorLaser.com iyakwenqabela ukushicilelwa kwemiyalezo eshintshaniswa nabantu besithathu nokudalulwa kwamaforamu, ezinkundleni zokuxhumana kanye nanoma iyiphi iwebhusayithi.
- Ingxenye "Returns - RMA "
Ngokusho komthetho 15/1999 kaDisemba 13, i-Protection Personal Data (LOPDP), sikwazisa ukuthi ngokugcwalisa amafomu, imininingwane yakho uqobo izogcinwa futhi icutshungulwe kumafayela u-Borja Corraliza Sanchez.
Inhloso eyinhloko yaleli fayela ukuphathwa kwe-RMA (Usebenzisa iwaranti yakho yomkhiqizo). Idatha yayo ingadluliselwa kumenzi esimweni semikhiqizo eyonakalisiwe noma enesici.
Ngokuthumela amafomu kusho ukuthi umsebenzisi unikeza imvume yakhe ukucubungula idatha ngokuya ngezinhloso ezinikezwe kwifomu ngalinye. IBorja Sanchez Corraliza ayidluliseli imininingwane kubantu besithathu ngaphandle kokuthi kumacala afakwe ngokusemthethweni noma agunyazwe umfakisicelo. IBorja Sanchez Corraliza yazisa abagcina imininingwane ngezinhloso zayo zokuthumela ezokuxhumana nge-imeyili noma ezinye izindlela zokuxhumana nge-elekthronikhi. Ababambi bayazi futhi le nhloso ebonakalayo futhi banikeza imvume yabo yokuthola imininingwane enjalo. Isivumelwano lapha esinikezwe usonkontileka wokuxhumana kwedatha kubantu besithathu singemukeleka ngaso sonke isikhathi, ngaphandle komphumela wokubuyela emuva.
2.1.4 Amalungelo amaqembu anentshisekelo
Umuntu othintekayo angasebenzisa amalungelo abo e-Arco (ukufinyelela, ukulungiswa kabusha, ukukhanselwa kanye nokuphikiswa) maqondana nemininingwane yabo ngokubhala nangokufaka isithombe sikamazisi ekhelini: Borja Corraliza, C / San Juan Bautista N10 1A, 45600, Talavera de la Reina, Toledo noma ngokusebenzisa ifomu lethu lokuxhumana. Leli sayithi linamamodeli atholakalayo ongasebenzisa kuwo amalungelo we-Arco.
2.1.5 Ikhwalithi yedatha
Abasebenzisi kumele baqinisekise ukuba neqiniso, ukunemba, ubuqiniso kanye nokuba yiqiniso kwemininingwane yomuntu eqoqwe ngabo ngenxa yokubhuka.
2.2 Ukusetshenziswa kwamakhukhi
Amakhukhi angamafayela wedatha amancane noma iqoqo lezinhlamvu eligcinwe kwi-hard disk noma kwimemori yesikhashana yekhompyutha yakho noma nini lapho ufinyelela amakhasi eWebhusayithi athile. Zisetshenziselwa iserver okuvunyelenwe ngayo ukuhlangana nezinketho zomsebenzisi ukuze ikubuyisele ukuxhuma. Ukufinyelela le webhusayithi kungabandakanya ukusetshenziswa kwamakhukhi, okuzohlose ukuqhubekisa inqubo yokuthengwa kwemikhiqizo noma izinsiza eziku-inthanethi, nokunikezela ngokukhangisa noma okuqukethwe okuthile noma imininingwane esemthethweni yokuthakazela umsebenzisi. Amakhukhi awakwazi ukufunda amafayili amakhukhi adalwe abanye abahlinzeki. Umsebenzisi angalungiselela isiphequluli sakhe ukuthi sixwayiswe lapho ethola amakhukhi futhi avikele ukufakwa kwamakhukhi ku-hard drive yakho. Ukuze wenze lokhu, umsebenzisi kufanele abonane nemiyalo namamanyule esiphequluli sakho ukuze athole imininingwane engaphezulu. Kayikho ikhukhi engakhipha imininingwane kwi-hard drive yomsebenzisi noma ifinyelele kulwazi lomuntu siqu. Mane nje uhlobanise isiphequluli sekhompyutha ethile nomthombo ongaziwa. Ukuphela kwendlela imininingwane eyimfihlo yomsebenzisi eyingxenye yefayela lekhukhi, ukuthi umsebenzisi uqobo anikeze lolu lwazi kuseva.
3 · Izimo Zokuthenga
Amanani nemibandela yokuthengisa kungokwaziswa kuphela futhi kungashintshwa ngokuphendula ukuguquguquka kwemakethe.Noma kunjalo, i-oda libekwa ngokugcwalisa ifomu le-oda, lisho ukuvumelana nentengo enikezwayo kanye nezimo zokuthengisa ezijwayelekile ezisebenza ngalesi sikhathi. Lapho i-oda ehlelekile isho ukupheleliswa kokuthengwa kwesokudla, nazo zonke iziqinisekiso ezingokomthetho ezivikela umthengi, futhi kusukela kuleso sikhathi izintengo nemibandela yenkontileka izobe, futhi ngeke iguqulwe ngaphandle kwesivumelwano esivelelayo sobabili Senkontileka.
3.1 Ukuvikelwa kwezingane
Ukuthengiswa kwanoma yimuphi umkhiqizo we-laser IIIB laser noma i-IV kubantwana kanye nokuvinjelwe okungezona izingcweti ezisebenza ngokuqeqeshwa okufanele . Kungumsebenzi kababa / umama / umnakekeli ukuqinisekisa ukutholwa kwezingane, hhayi ukuthi i-resposabilidad yethu ithole noma yiziphi izinto ezinqatshelwe ukuya eminyakeni yabo futhi akunakwenzeka ukuqinisekisa ukunemba kwemininingwane enikezwe abathengi kwinqubo yokubhalisa. Ukwephulwa kwalesi sigatshana kweqa noma iyiphi inzalo yezokuphepha noma ukubuyela ekuthengeni, ukusula ngokushesha lapho kudingeka kutholakale.
· Yonke imikhumbi iphuthumisa njalo ukuthi kwenzekani kungakapheli amahora angama-24 okusebenza ngemuva kokuqinisekiswa kwenkokhelo yikhasimende.
· Izikhathi kwezidingo kuncike ohlotsheni lokuthumela olukhethwe ikhasimende, avele phakathi nenqubo. Lezi zikhathi zihlala zilinganiselwa futhi azisoze zifakwe isikhathi somshuwalense, ngakho-ke ngeke zibe yisizathu esizwakalayo sokwenqaba iphakheji noma ukukhansela ukuthenga, ikhasimende liyaqonda futhi lamukele ukwamukela kwakhe bese lifuna izindleko ezivelayo uma kungenjalo ngaphandle kwalesi sizathu.
Ekuthumeleni okuvamile uma kwenzeka kulahleka, iklayenti kuzoba ngubani ozothatha inani eliphelele lokulahleka. I-TorLaser.com ayizukubekwa icala ngalesi sigameko, ngoba imininingwane enjalo ayibhaliswanga eposini. Uma wenza ukuthenga ngokukhetha le ndlela yokulethwa ngokuya ngale mibandela, uma kungenjalo futhi ukhethe enye indlela yokuthumela.
· Ikhasimende lizoba namahora angama-24 wokuqinisekisa ubuqotho bazo zonke izingxenye ze-oda futhi liqinisekise ukuthi lifaka konke okudingayo kwimikhiqizo embozwe. Ngemuva kwalawa amahora angama-24 kuzonikezwa ukuthunyelwa bese kwamukelwa izicelo zokufuna ukulimala noma zamaphutha ngokuhanjiswa.
· Kwathathwa njengomyalo owethulwe lapho irisidi lokulethwa lisayiniwe yikhasimende. Kungakapheli amahora angama-24 lapho iklayenti kufanele lihlole imikhiqizo lapho litholile bese lidalula konke ukuphikisana okungahle kube khona.
· Uma uthola umkhiqizo owonakele ngothintana nezokuthutha kunconywa emahoreni angama-24 okuqala ukuze ubange umthelela kulowo ophethe. Ngokufanayo kufanelekile ukucabanga ophethe.
Kufanele bahlole okuqukethwe kwabo ngaphambi kwesikhulu esenza ukulethwa, uma kuphukile futhi kungalahle lokhu okuhle noma lesi sikhala sifinyelela kumphathi kufanele acele isimangalo ngokuqopha nokuthumela info@torlaser.com inombolo yemizuzu ukusivumela izehlakalo. Alikho inani lemizuzu esingabophezeli kwimikhiqizo engatholakalanga.
Ngokulandelayo kufanele utshele icala lakho ngefomu lethu lokuxhumana, elibonisa inombolo ye-oda nenkinga eliyivezayo.Lapho esetholile lesi sigameko kuzothunyelwa ukuthunyelwa okusha uma kufunwa nguwe.
· Isithunywa asibizi ngocingo ukuqinisekisa ukulethwa. Ukulethwa kwenziwa ngqo, futhi uma ungekho ekhaya uthumela inothi ukuze uthinte abamele futhi wenze ukulethwa kwamahhala kwesibili. Ukulethwa kwesithathu nokushintsha kwendlela lapho kuthunyelwe i-oda kuzothunyelwa ngumamukeli, ngeke kuze kube yithina. Awukwazi ukusetha isikhathi sokulethwa ngoba kuncike endleleni yokusebenza yomthengisi ngalolo suku.
Uma usuhambisile, kubhekwe izindleko eziyi-10 € nganoma yiluphi ushintsho lwamakheli noma phambili, kungaba ngesicelo noma ngenxa yokuthi aluchaziwe kahle ku-oda, luzothwalwa yikhasimende.
· Uma iphakethe lomyalo osuvele ukhokhelwe libuyiselwa ngekheli elingalungile, ukungabikho, ukungakhethi noma ukwenqaba, kuzokwazisa ikhasimende uma silithola ehhovisi lethu lapho ukhetha lowo ofuna ukwenza naye. Uma ucela ukuthunyelwa okusha kuzokhokhiswa u- € 5 njengokushaja kokuthumela. Yiba nenyanga eyodwa kusuka kwesaziso esivela kithi ukuze uvumelane ngesinqumo, ngemuva kwalesi sikhathi lapho kuzothathwa njengokungaphendulwanga kungakunaki ukuthengwa futhi kuholele imibhalo yakhe kanye nenani elikhokhelwe yona.
3.3 Ukukhanselwa kwama-oda
Ukukhanselwa kwe-oda kwamukelwa kuphela uma kungakathunyelwa i-oda lakho. Uma kungenzeka ilungiselelwe kodwa ingathunyelwa uma ufuna ukuyikhansela ungakwenza lokho ucabanga ukuthi izindleko ezingama-10 € zizodonswa kwinani elivele likhokhelwe ekucutshungweni koku-oda. Uma ngingakhokhi i-oda lakho ngokukhetha indlela yokukhokha ekulethweni, izokhokhiswa i-10 € ngokudluliselwa kwebhange kunoma iyiphi i-akhawunti ezohlinzekwa, uma kungafungi futhi kuvuma ukuthi isikweletu seTorLaser.com sizothatha izinyathelo zomthetho Kubona kufanelekile ukubuyisa leyo nani. Uma i-oda lakho selivele lithunyelwe lingakuthumela futhi kungakapheli izinsuku eziyi-14, kepha izindleko zokuthumela zizothathwa yikhasimende / umthengi nakho kuzodonswa esilinganisweni sokubuyisela ngo-15 € ngomqondo wokuthumela ngakolunye uhlangothi lwethu futhi Hlola.
Isibopho somthengi / ikhasimende siyacelwa ukuthi siqiniseke ukuthi umkhiqizo yiwo owufunayo futhi uma ungabaza ukuthi yisibopho somthengi / othintana nekhasimende https://torlaser.com ngolwazi mayelana nomkhiqizo ngaphambi kokuthenga kwawo.
Uma kwenzeka ukuthengwa, lapho kuthunyelwe, kwenqatshwa ngumqaphi / ikhasimende ngezizathu ezingaphezu kweTorLaser.com, lokhu kungafuna ukuphatha lowo okutholile ,kuphoqa ukuthi akhokhe ngokugcwele izindleko ezizothunyelwa ku-20 €.
4 · Uyabuya
I-TorLaser.com inikeza amandla okubuyisela imikhiqizo kungakapheli izinsuku eziyi-14, kubalwa kusukela ngosuku lokutholwa kwezimpahla ngumthengi, inqobo nje uma imibandela ebekwe kuleli khasi ihlangabezana.
4.1 Izimo zembuyiselo zamakhasimende wangasese nawamabhizinisi
Akukho zimpendulo ezizokwamukelwa ngemikhiqizo elandelayo, njengoba isungulwe nguMthetho 47/2002, womhla ziyi-19 kuZibandlela, ukuchibiyela i-Law 7/1996 yomhla ziyi-15 kuMasingana, kweRetail Trade, ukuze kuguqulwe ngomthetho waseSpain Directive 97/7 / EC ngezinkontileka zebanga futhi uvumelanise umthetho nezindlela ezahlukahlukene ze-EU.
-Ikhiqiza ngokuya ngokuguquguquka emakethe yezimali umthengisi angakwazi ukuyilawula.
-Imiklamo eyenziwe ngokuya ngemininingwane yomthengi noma eyenziwe ngokwezifiso ngokuqondile efakwe njengokuchaziwe kumdwebo wokuhlelwa, noma okungenakuphikwa ngemvelo yabo noma onecala ukuwohloka noma ukuphelelwa yisikhathi ngokushesha.
-Article 45. Ngaphandle ngaphandle kwesandla sokuhoxa.
Ngaphandle kokuthi kuvunyelwene ngenye indlela, izinhlinzeko zendatshana eyedlule ngeke zisebenze kulezi zinkontileka ezilandelayo:
a) Izinkontileka zokuhlinzekwa kwezimpahla ezinentengo yazo engaphansi kokushintshashintsha emakethe yezezimali umthengisi angakwazi ukuyilawula.
b) Izinkontileka zokuhlinzekwa kwezimpahla ezenziwe ngokuya ngemininingwane yomthengi noma uqobo uqobo noma okungathi, ngemvelo yazo, azikwazi ukubuyiselwa noma zibophezeleke ekulimazeni noma ukuphelelwa yisikhathi ngokushesha.
c) Izinkontileka zokuhlinzekwa kwamateyipu okulalelwayo noma ama-video, ama-discs kanye nesoftware yekhompyutha ebingavulwa ngumthengi, kanye namafayela ekhompyutha, anikezwe nge-elekthronikhi, angalandwa noma aqalwe kabusha ukusebenza ngokushesha.
d) Izivumelwano zokuhlinzekwa kwamaphephandaba, amaphephabhuku nomagazini
e) Imikhiqizo eyake yasebenza, yabhalisa, yahlola noma isetshenziswa futhi engathengiswa njengemikhiqizo emisha enophawu lwe-seal oluvulekile noma olonakalisiwe.
· Ukuze wenze ukubuya kumele uthinte thina ukugcwalisa isicelo sokubuya. Ngemuva kokuphothula isicelo, kuzokwabelwa inombolo yokubuya futhi kukhombise imininingwane yokuthumela.
· Yonke impahla kufanele ibuyiselwe ekuhlanganisweni kwayo kwangempela, isesimweni esifanele futhi ngaphandle kokudalulwa. Ikhasimende kufanele livumelane nezimo futhi lithathe izindlela ezifanele zokuvikela kanye nokufakwa komkhiqizo ukuthunyelwa endaweni yethu yokugcina izinto. Ngaphandle kwalokho iTorLaser.com inelungelo lokunqaba ukubuya.
· Ikhasimende lizobhekana nanoma yimuphi umonakalo odalwe ngesikhathi sokuhamba kwembuyiselo ngomkhiqizo.
· Izimbuyiselo kufanele zilethwe endaweni okuyiwa kuyo kungakapheli izinsuku ezingama-30 usuku lokwamukelwa kwembuyiselo. Uma kungenjalo kuyokwenqatshwa futhi kubuyiselwe.
· Ngemuva kokuthola izimpahla nobungcweti okusesimweni esifanele, ukubuyiselwa kwemali kuzocutshungulwa uma kukhonjisiwe.
· Izindleko zokuhamba ezitholakale ekubuyeni ezithwalwa yikhasimende, kanye nezindleko ezenziwayo zokuthumela kuye kanye nokuhlelwa kwe-oda okulinganiselwa ku- € 15 kuzodonswa esilinganisweni sembuyiselo yakhe esele.
· Kuphela uma kwenzeka ukuthi ukubuya kubangelwa iphutha lokuthumela noma ezinye izizathu ezifakazelwa ukuthi sizonakekela ukuthunyelwa ngensizakalo yemeyili ejwayelekile, iba yingozi yamakhasimende ebhekene nokulahleka kwephakeji noma ukuthatha izindleko ezingezekile zokuthumela ngokushesha noma komshuwalense uma ufisa.
· Ungamukeli noma yiziphi izinzuzo ngokulethwa.
· Ngokuthenga uvumelana nale mibandela.
4.2 Imibandela yembuyiselo yabasabalalisi
Ukubuyiselwa kwezinto kuphela ngaphandle kokuzumbula futhi kusesimweni esifanele kuzokwamukelwa kungakapheli izinsuku eziyi-14 zokutholwa.
Ukubuyiselwa kwemali okunjalo kuzocutshungulwa njengembuyiselo yezohwebo, ngoba akukho mthetho olawula amalungelo wokubuya phakathi kwezinkampani futhi lezi zinqubo zilawulwa yizimo zeTorLaser.com.
Imikhiqizo eku-blister noma kufakwe uphawu lokushisa, neminye imikhiqizo enophawu oluphukile, awunakubuyiselwa.
Lezi zimo azenzi ize i-waranti noma enye yemikhiqizo engenaphutha njengoba kuchaziwe ngewaranti yomkhiqizi. I-TorLaser.com inelungelo lokunqaba ukubuyiselwa kwemali uma kungenzeka kutholwe noma iyiphi i-anomaly kumikhiqizo ebuyiselwe.
Imikhiqizo inewaranti yeminyaka eyi-2 kusukela ngosuku lokuthola ukuthunyelwa. Abenzi bemikhiqizo banesibopho sokuqinisekisa nokunikeza usizo oludingekayo lobuchwepheshe kanye nokuthengisa ngemuva. Uma ikhasimende linemibuzo mayelana nomkhiqizo, kufanele uthintane nabakwa-technical assistance Service (SAT) njengomkhiqizi ngamunye.
Iwaranti iyizinyanga eziyi-6 iTorLaser.com njengomhambisi, kusuka ezinyangeni eziyi-6 zosuku loku-oda iwaranti enikezwe umenzi ngokuqondile. I-TorLaser.com uma yehlulekile komunye wale mikhiqizo inikezela ikheli lomthengi womenzi ukuyithumela ukulungiswa noma okunye esikhundleni salokho. Izindleko zalokhu kubuya zizothwalwa ngumthengi nganoma yisiphi isikhathi.
· Uma isici sivela kancane ezinyangeni eziyi-6 zokuqala kusukela ekulethweni kwezimpahla, kucatshangwa ukuthi iphutha selivele likhona ngenkathi uyithenga futhi umthengi akudingeki afakazele lutho.
· Kodwa-ke, lapho ukuntuleka kokuvumelana kuzwakala ngemuva kwezinyanga eziyi-6 futhi ezimweni ezingabazayo, umenzi angadinga umbiko wesazi ozimele ukucubungula iwaranti. Ezimweni ezisobala zokungasebenzi kahle noma ukusebenza okungajwayelekile ngaphansi kwesiqinisekiso akunankinga.
Kunoma ikuphi, ngesikhathi lapho umthengi encishwa umkhiqizo obala isikhathi sesiqinisekiso umisiwe; ngokwesibonelo, uma ukulungiswa kwento elukhuni izinsuku eziyi-15, isikhathi sesiqinisekiso sizophela ngemuva kwezinsuku eziyi-15 kunokuba kuhlelwe kwasekuqaleni.
Esimweni lapho iklayenti libona ukwehluleka noma ukungasebenzi kahle komkhiqizo, uma nje kungekho okukhohlisayo yikhasimende, iklayenti lingakhetha elinye esikhundleni salo, ngaphandle uma kungenzeki noma lingalingani neTorLaser.com, esimweni lapho inani lemali eholayo izobuyiselwa.
I-TorLaser.com inelungelo lokufaka omunye umkhiqizo endaweni ehlukile kodwa ngokusebenza okulinganayo komkhiqizo ocelwe ikhasimende ngenxa yokuvuselelwa okuvela kumenzi.
1. Xhumana nathi ngomzila ofanayo engiwusebenzisayo ukubeka i-oda lakho. Sizokutshela ikheli le-imeyili le-technical Support elizophatha ukucubungula iwaranti yakho. Akukho ukubuya komkhiqizo ngaphansi kwewaranti ngeke kwamukelwe ngaphandle kwesicelo futhi ngaphambili kwadluliselwa kubaphathi beTorLaser.com, abazophatha inqubo yokubuyisa umkhiqizo.
2. Sicela usho ku-imeyili oyithumelayo ukuze uxhase ikhodi yakho yoku-oda, incazelo yokuvela, ikhodi ye-invoice nenombolo ye-serial yephiko uma kunesidingo.
3. Uma kunesidingo sokusithumela umkhiqizo wakho ukuze sibuyekezwe kuzonikeza ikheli lokuthumela. Izindleko zokuthumela, zizothwalwa yikhasimende. Ngapha into eyonakele kufanele ifake ikhophi ye-invoice nenkontileka yesiqinisekiso esisayinwe kahle bazothumela i-technical Support. Ngemuva kwezinsuku eziyi-7 zokufunwa kwamakhasimende yiTorLaser.com, uma umkhiqizo ungakacutshungulwa futhi uhanjiswa endaweni ekhonjiswe yiTechnical Support, umnyango wethu ngeke usamukele isimangalo futhi isicelo sizokhanselwa ngokukhansela noma iyiphi incwadi esele yewaranti esebenza lapho izinto zokusebenza. Uma kungenxa yokupakisha kabi into elimele itholwa, ngeke sibe nesibopho sesinxephezelo esinjalo. Yazisa inkinga yamakhasimende futhi ixazululwe ngokuqondile yikhasimende ne-ejensi yokuhamba. Noma yikuphi ukwephulwa kwezinto ezibonakalayo kwalezi zimpawu, kuzothunyelwa emuva ukuqoqa izimpahla, yize izinto zihambisana nezinye izingxenye zewaranti. Uma ukhetha indlela yokuthumela engavinjelwe nephakethe le-estravía, ikhasimende lizobhekana nokulahleka.
a) Uma ukwamukelwa komkhiqizo kutholakala ukuthi iphutha limbozwa yizimo zewaranti, lapho lilungisiwe noma selitshintshiwe lizobuyiselwa kwikhasimende mahhala.
· Ukulungisa noma ukushintsha. Into yokuqala okufanele uyenze ukuthumela umkhiqizo ukulungisa noma ukuwuthatha kabusha. Okukhethwa kuphumule kumthengisi, kuzothatha isinqumo ngokuya ngezindleko ezikhiqiza inketho ngayinye: uma enye ingafani nenye, umthengisi angakhetha okulula kakhulu kwizintshisekelo zabo, inqobo nje uma umthengi ezobuye abhekane nezinkinga ezinkulu. Uma kungatholakali i-athikili, sizoqhubeka nokushintshela entweni yokusebenza ngokulingana noma ephakeme, ngaso sonke isikhathi sazisa futhi samukelwe, futhi inqobo nje uma isicelo seklayenti kasihlukani, njengoba kukhonjisiwe eMthethweni 23/2003 ka-Julayi 10 weziQinisekiso Ekuthengisweni Kwezimpahla Zabathengi (I-BOE no. 165, ka-11-07-2003)
Ukuncishiswa kwentengo noma ukunqanyulwa kwenkontileka. Lapho kungenakwenzeka (noma kunengqondo) ukufaka umkhiqizo kube okusha lapho ukulungiswa noma okunye kungenisa ukwenza umkhiqizo ngaphansi kwezimo lapho isikhathi sesikhukhumale ... umthengi angakhetha phakathi kokubuza ukwehliswa kwentengo noma ukunqanyulwa inkontileka (uma ukuntuleka kokuvumelana kubalulekile). Ngaphezu kwalokho, umthengi unelungelo lokumfaka emgunyeni ngalo monakalo.
I-TorLaser.com ngenxa yezizathu ezingaphezu kwenkampani ayenzi ukuletha umkhiqizo ofunelwe ngesikhathi esibekiwe, lesi sikhathi sinqunywa ngumthengisi noma umenzi, ngaphakathi lapho okuzokwaziswa ikhasimende ngokufanele.
Ukuthumela okubuyayo kuzokwenziwa ngeposi, ukuze kube ngumthengi obhekele noma ikuphi ukulahleka, ukulimala noma ukulahleka, uma ukhetha ukuthunyelwa okusheshayo okunomshuwalense futhi ungakhetha ukubuyiselwa nge-messenger, kufanele ukhokhe i-3 € Le mali izokhokhwa ngokudluliselwa kwebhange noma iKhadi.
b) Uma ukwamukelwa komkhiqizo kuqinisekisiwe ukuthi imishini isebenza kahle, izobuyiselwa kumakhasimende kufanele akhokhe izindleko zokuhamba zamakhasimende ezenziwe njengezindleko ezimbalwa zokusebenzisa amandla nokuhlola, okulinganiselwa ngenani eliphelele le- € 10. Ukuthumela okubuyayo kuzokwenziwa ngeposi, ukuze kube ngumthengi onokwethenjelwa nganoma yikuphi ukulahleka, ukulimala noma ukulahleka, kufanele kukhethe ukuthunyelwa okuphephile futhi okusheshayo kungakhetha ukuthi kubuyiselwa nge-courier, kwandise inani le-3 € ngaphezulu, i-13 € isiyonke. Le mali izokhokhwa ngokudluliselwa kwebhange noma iKhadi.
c) Uma ukutholwa komkhiqizo kutholakala ukwehluleka kwemishini kwephula imibandela yesiqinisekiso kuzosenza i-warranty ingasebenzi. Into izobuyiselwa kwikhasimende kufanele ikhokhe izindleko ezifanayo zokuhamba futhi ikhiqize ezinye izindleko zokubamba nokuhlola, kulinganiselwa ngenani eliphelele le-10 €. Ukuthumela okubuyayo kuzokwenziwa ngeposi, ukuze kube ngumthengi onokwethenjelwa nganoma yikuphi ukulahleka, ukulimala noma ukulahleka, kufanele kukhethe ukuthunyelwa okuphephile futhi okusheshayo kungakhetha ukuthi kubuyiselwa nge-courier, kwandise inani le-3 € ngaphezulu, i-13 € isiyonke. Le mali izokhokhwa ngokudluliselwa kwebhange noma iKhadi.
Lapho kudluliselwa phambili kokubuyekezwa, izindleko ezicatshangelwe ezingama-5 € nganoma yiluphi ushintsho lwamakheli noma phambili, kungaba ngesicelo noma ngenxa yokuthi aluchaziwe kahle ku-oda, luzothwalwa yikhasimende.
Uma iphakethe libuyiselwa ngekheli elingalungile, lingekho, ungakhethi noma ulinqabe, lizokwazisa ikhasimende lapho silithola ehhovisi lethu ukukhetha ukuthi ufuna ukuhamba nalo yini. Uma ucela ukuthunyelwa okusha kuzokhokhiswa u- € 5 njengokushaja kokuthumela.Yiba nenyanga eyodwa kusuka kwesaziso esivela kithi ukuze uvumelane ngesinqumo, ngemuva kwalesi sikhathi lapho kuzothathwa njengokungaphendulwanga kungakunaki ukuthengwa futhi kuholele imibhalo yakhe kanye nenani elikhokhelwe yona.
5.2 Ukukhanselwa kweziqinisekiso
· Ukusetshenziswa okungafanele, ukuphatha noma ukugcinwa yiKhasimende lemishini noma lezinto.
· Izithako ezishiswa ukuhlinzwa ngogesi noma okweqile.
· Izingxenye eziphukile noma ezilimele zithinteka.
· Ukulungiswa okungafanele, ukuguqulwa kwekhasimende leqembu.
· Ukwehla, ukususa noma ukufihlwa yikhasimende, ilebula lewaranti noma umenzi weTorLaser.com yonke imikhiqizo (kufaka amalebula anezinombolo ezilandelanayo kanye nezimpawu zokuphepha).
· Amaphutha adalwe ngenxa yokusetshenziswa okungafanele noma ngaphandle kwemibandela ebekiwe, ukufakwa okunesici, noma ukugqoka nokudiliza kwemishini.
· Ukulimala okubangelwa izinhlekelele ezinjengomlilo, isikhukhula, umoya, ukuzamazama komhlaba noma isivunguvungu.
· Ukulimala kwe-cosmetic noma ukusikeka kwezinto zepulasitiki ezinjengezindlu.
· Ukulimala okubangelwa umthelela nezinye izinto, ukuwa, uketshezi oluchitheka noma ukucwiliswa koketshezi.
· Ukusebenza kahle ngenxa yokuphazanyiswa ochwepheshe abangagunyaziwe kanye nokushintshwa okulandelayo noma ukwelulwa okufakiwe ekucushweni kwasekuqaleni.
· Amaphutha wokucushwa ahlobene Amaphutha noma ukungasebenzi kwezakhi.
· Izingxenye ezisetshenziswayo, njengebhethri. Kubhekwa njengokujwayelekile ukuncishiswa kwempilo yebhethri ngenxa yokushaja okuphindaphindiwe / ukukhishwa.
· Ukulimala ngengozi, ukuhlukunyezwa, ukusetshenziswa gwenxa noma izinhlelo ezingalungile.
· Ukuwohloka ngenxa yokusetshenziswa okujwayelekile.
· Noma yikuphi ukulimala noma ukulimala uma ilebula lelebula le-serial nele-product noma noma yiziphi izakhi zalo seliguquliwe, lasuswa noma lisusiwe.
Kugcine ukubuyekezwa: 21-12-2012